7 Cunto Oo Ilaaliya Caafimaadka Kelyaha - Daryeel Magazine
7 Cunto Oo Ilaaliya Caafimaadka Kelyaha
Xannuunada halista ah ee kelyaha ku dhaca oo ay adag tahay daawadoodu waxa uu dalka Maraykanka oo keliya saameeyaa 26 milyan oo qof. Waxa halis ugu jira kelyaha in ay fariistaan dadka ay hayaan xannuunada macaanka, dhiig-karka.
Haddaba, war farxad leh oo la soo saaray sheegay in qofku yarayn karo xaddi kelyuhu ku xannuuni karaan, isagoo isticmaalaya cunto uu si joogta ah u heli karo, kuwaas oo ay ka mid yihiin:
Toonta darayga ah ee aan wershad iyo wax soo marin, waxay faa’iido u leedahay in ay ka hortago caabuqa, isla markaaha hoos u dhigto duxda, waxaanay ilaalisaa caafimaadka kelayaha, sababtoo ah waxa la xaqiijiyey in qofka quuta toonta aanu ku dhicin cudurka kansarka, kelyahana ka ilaaliso in caabuq gaaro.
2. Ukunta Cad:
Ukunta cad waxa ku badan faytamiinnada iyo macdanaha jidhku u baahan yahay, guud ahaanna caafimaadka qofka wuu wajaaniya. Ukunta cad wuxuu ka kooban yahay booratiin, waxana ku yar macdanaha Potasium iyo Phosphorus, laakiin waxa ku jirta macdanta Iron oo kelyaha qaabaysa, Ukunta noocan ah waxa aad ugu yar duxda, kelyaha iyo caafimaadka qofkana waxba ma yeesho.
Sida toonta oo kale, basashuna waxaa weeyaan Antioxidants, taasoo la dagaalanta kansarka iyo wadno-xanuunka, qofka ceeriinka ku cuna basasha kuma dhaco caabuqa xubnaha gaara, gaar ahaan xannuunada kelyaha asiiba oo uu ka badbaado.
4. Saliida Saytuunta (olive Oil):
Cilmi baaris lagu sameeyay dadka ku nool dalalka aad looga isticmaalo saliida Saytuunka ayaa iftiimisay in ay aad ugu yaryihiin cudurrada kansarka iyo beerka xanuunka, waxaana la rumaysanyahay in sababtu tahay maadooyinka ku jira saliida saytuunka ee kala ah oleic acid iyo antioxidants ee ka hortaga caabuqa.
Kalluunka biyo qabaw lagu mayro, siiba nooca loo yaqaan Salmon, trout, Herring iyo Sardines waxa ku badan booratiinka iyo macdanta Omega-3 Fatty Acid, kaasoo jidhka bina’aadamku aannu awood u lahayn inuu sidiisa u soo saaro. Dadka cuna kalluunka darayga ah waxa ay ka badbadaan xannuunada ay ka midka yihiin wadno-xannuunka, dhiig karka iyo beer subaga, taas oo macnaheedu tahay in kelyahiisuna badbaadayaan.
6. kaabashka( cabbage):
Kaabaska waxaa ku jira maadooyin la yiraahdo phytochemicals oo la dagaalama kansarka sidoo kalana ilaaliya caafimaadka wadnaha. Kaabashka waxaa ku badan Fiitamiinada K, C, fiber fiitamiin B6 iyo folic acid.
Tufaaxa waxa lala xidhiidha inuu si khaas ah daawo uga yahay xannuunada Kansarka, wadne-xannuunka iyo subagawga jidhka, sidoo kalena waxa ku jira walxo ka hortaga caabuqa xubnaha jidhka ku dhaca, kelyahana si gaar ah wuxuu u siiyaa macdan faa’iido u leh caafimaadkooda.
4 Cunto Oo Timaha Ka Ilaaliya Inay Cirro Isku Bedelaan 8 Cunto Oo Ka Hortaga Kansarka 4 Cunto Oo Khatar Ku Ah Caafimaadka Caruurta 8 Cunto Oo Si Weyn U Caawiya Dhimista Miisaanka Iyo Kobcinta Caafimaadka